Soosaarka Shiinaha Fe-Cr-Al Waxsoosaarka iyo Warshaddiisa | Shougang
Daawooyinka Fe-Cr-Al waa mid ka mid ah aaladaha korontada ku shaqeeya ee sida weyn loo isticmaalo gudaha iyo dibaddaba. Waxaa lagu gartaa adkaysi sare, isugeyn heerkulka yar oo iska caabin ah, u adkaysi fiiqista wanaagsan, heerkulka sare iyo wixii la mid ah. Alloysyadan ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa sameynta qalabka kululaynta warshadaha iyo qalabka kululaynta guryaha. Alloys Fe-Cr-Al waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu weyn ee shirkadeena. Dhammaan alaabooyinka kuleylka ee kuleylka ee ay soo saarto shirkaddeena waxaa lagu kala soocayaa isku-dhafka isku-dhafan, iska caabin sare, cabbir sax ah, nolol shaqeyn dheer iyo habsami u socod wanaagsan. Macaamiisha ayaa ku dooran kara darajada ku habboon shuruudaha kala duwan.
SG-GITANE'S silig kuleyliyaha iska caabinta 0Cr25Al5 wuxuu ka helay cinwaanka sheyga darajada heer sare Wasaaradda Shiinaha ee Warshadaha Birta. Sannadkii 1983-kii, siligga kululaynta shirkadda ee HRE ayaa la siiyay abaalmarinta heerka labaad ee horumarka sayniska iyo teknolojiyadda ee Dowladda Hoose ee Beijing.
Dhumucdiisuna waa 0.05—0.35mm
Xarig duuban oo kulul
Max. heerkulka hawlgalka joogtada ah ℃
Cunsurka heerkulka ee adkeysigaCt
Cufnaanta （g / cm3）
Barta dhalaalida (qiyaastii.) (℃)
Xoog siligga (qiyaastii.) （N / mm2）
Kordhinta dillaaca (qiyaastii.)%
Xiga: Isku-darka Ni-Cr
FE CR AL silig koronto oo heer sare ah
FE CR AL Xarigga Cadaadiska Sare
FE CR AL Daawaha Alloys
FE CR AL Fiilooyinka kululaynta caabuqa
Heerkulka High silig koronto, Silig koronto oo adkaysi u leh, Alaab-qeybiye koronto kululeeyaha, Fiilooyinka kululeeyaha korontada, Silig iska caabinta korontada, Silig kululaynta korontada,